विशेष Archives ~ Page2of 43 ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर । सरकारले बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई व्यबस्थीत बनाइने उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ दायरा बढाउने, विद्यतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा कोरोनाबाट प्रभावित व्यबसायलाई ५ प्रतिशत व्याजमै कर्जा दिइने घोषणा गरेको छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई बजेटले समेटेका विषयहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । सहुलीयत पूर्ण कर्जाको आकार बढाइयो विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रभथमिकता दिइने
बैंकिङ खबर । सरकारले एकदशकदेखि जनतालाई बढी सपना बाँड्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि जनतालाई ठुला सपना देखाउने काम अझ विस्तार भएको छ । पटक पटक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका २२ आयोजना अलपत्र छन् । कतिपयको कामै सुरु गरिएको छैन भने कतिपयको अध्ययन समेत भएको छैन । कतिपय आयोजना
बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा आएका विभिन्न परिवर्तनमध्ये डिजिटल कारोबार एक हो । डिजिटल कारोबारमा बैंकहरुले सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै यसबाट बच्नका लागि बैंकवित्तले डिजिटल कारोबारलाई निशुल्क गराए । छोटो अबधिका लागि लकडाउन हुने अनुमान गरिएको थियो । जसले गर्दा डिजिटल कारोबारसँगै बैंकहरुले एटीएम कार्डलाई पनि सहजीकरण
बैंकिङ खबर । विश्व बैंकले कोरोनाले कारणले विश्वभरमा गरीबी निम्त्याउने बताएको छ । बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपोसले कोरोनाले विश्वभरिमा ६ करोड मानिसहरुलाई अत्यन्त गरिब बनाउने साथै पछिल्लो तीन बर्षमा गरेका सबै नाफा पनि गुमाउने बताएका छन् । यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा ५ प्रतिशतले गिरावट आउने विश्व बैंकको अनुमान छ । यसले विश्वको सबैभन्दा गरीब देशहरूमा
‘व्यबसाय बन्द छ, संचालनको टुंगो छैन : भाडा र व्याज जसरी पनि तिर्नुपर्ने ?’
बैंकिङ खबर । लामो समयको लकडाउनका कारण आम मानिसको जनजीवन अस्त व्यस्त हुन थालेको छ । यो समयमानीजि क्षेत्र र विशेषगरी गरीखाने बर्ग भने अत्यन्तै मारमा परेको छ । बन्द सटरको भाडा, बन्द व्यबसायको कर्जाको व्याज अनि आफू पनि बसेको घरको भाडा । बल्ल तल्ल आँट गरेर बैंकबाट कर्जा लिएर व्यबसाय गरेकाहरु त अझ बढी
तेस्रो त्रैमासमा कुन बैंकले कति कमाए ? कसको अबस्था कस्तो ?
बैंकिङ खबर । सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरुले तेस्रो त्रैमासको अबस्था सार्वजनिक गरेका छन् । लकडाउनको अबस्था र कारोबारका मन्दी आएका कारण अधिकाँस बैंकहले नाफा घटाएका छन् । बैंकहरुका अन्य सुचांकमा त्यति फरक परेको देखिँदैन । तर अर्को त्रैमासमा भने बैंकहरुको रिपार्ट नकारात्मक आउने संकेत देखिएको छ । हेरौं चैत मसान्तसम्मको बैंकहरुको आम्दानी रिपोर्ट नबिल बैंक
२ प्रतिशत व्याज छुट दिन नसकिने, राष्ट्र बैंकले गलत नीति ल्याएको बैंकरको भनाई
बैंकिङ खबर । संसदको अर्थ समितिमा बैकरहरुले राष्ट्र बैंकले सबै ऋणीलाई दुई प्रतिशत ब्याज छुटको लागि ल्याएको निर्देशन उचित नभएको भन्दै २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने नीति गलत भएको बताएका छन् । कोरोना भाइरसको रोकथाममा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अर्थतन्त्रमा असर परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने नीति लिएको हो । बैंकरहरुले
बैंकिङ क्षेत्र कर्मचारी कटौतीको तयारीमा
बैंकिङ खबर । एकतिहाई कर्मचारीबाट बैंकिङ क्षेत्र सुचारु गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएसँगै बैंकहरु कर्मचारी कटौतीको तयारीमा लागेका छन् । कसरी कति कर्मचारी हटाउने भन्नेबारे निर्णय भने भइसकेको छैन । बैंक वित्तका सबैजसो शाखा संचालनमा आउँदा कर्मचारी भने एकतिहाई मात्रै परिचालन हुने छन् । यसो हुँदा बैंकवित्तले कर्मचारीलाई परिचालन नगरी नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने अबस्था
बैंकिङ खबर । नीजि क्षेत्र र बैंकरबीचको सम्बन्ध दरारतिर अग्रसर भएको छ । नीजि क्षेत्रले राष्ट्र बैंकद्धारा घोषित २ प्रतिशतको व्याजदर छुट कम भएको भन्दै बढाउन माग गरिरहँदा बैंकर्स संघका अध्यक्ष भूवन दाहालले सार्वजनिक रुपमै उद्यमीहरुलाई नाफा लुकाउने व्यबसायीको आरोप लगाउँदै उनीहरुलाई छुट दिइनु गलत भएको बताएका छन् । उनको यो भनाईले सिंगो नीजि क्षेत्रलाई
कोरोना प्रभावित ऋणिलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणिहरुको ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुका लागि ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको हो । चैत मसान्तसम्मको कायम ब्याजदरमा चौथो त्रैमास अर्थात वैशाख, जेठ
चैतको किस्ता काटीएका ग्राहकले अति आबश्यक परे रकम फिर्ता पाउने
बैंकिङ खबर । लकडाउनमा बसेका ग्राहकहरुलाई सहज होस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत्र मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्ममा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई २०७६ चैत १६ गते सर्कुलरमार्फत निर्देशन दियो । यस्तो किस्ताको हकमा कुनै जरिवाना शूल्क लिन नपाईने पनि स्पष्ट पारिएको थियो । तर,
बैंकिङ खबर । वि.सं. २०७६ को अन्त्य भई वि.सं. २०७७ सालको सुरुवात भएको छ । यो अवस्थामा विगतलाई फर्केर हेर्दा, एक वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै प्रिय र अप्रिय घटनाहरु भएका छन् । जसमध्ये, एक अप्रिय घटनाको हामी सामना गरिरहेका छौँ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा
सरकारी राहत योजना : चैत महिनाको घरभाडादेखि स्कूल फि सम्म निशुल्क
बैंकिङ खबर । कोरोना भाइरसबाट देश आक्रान्त भएका बेला सरकारले राहातका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न राहत ल्याएको हो । जसमा उल्लेख गरिए अनुसा विद्युत छुट, स्कूल फी छुट तथा घरभाडा समम छुटको व्यबस्था गरिएको छ । छोटकरीमा सरकारी राहात प्याकेजका बुँदाहरु # माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले पनि एक महिनाको शुल्कमा छुट
एटीएम कार्डको प्रयोग गरौं, बैंकिङ क्षेत्रमा भिडभाड कम गरौ ।
अपेक्षा ढुंगाना, बैंकिङ खबर । कोरोना भाइरसका कारण यतिबेला सन्सार आतंकित बनेको छ । यो संक्रमणबाट बच्नका लागि हरेक देशहरुले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि भिडभाडमा नजानका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपाय नै भिडभाडमा सहभागि नहुनु हो । नेपाल जस्तो मुलुकमा यसको
रेमिट्यान्स घट्यो, शोधानान्तर बचतमा : यस्तो छ देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिती
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनाको तथ्यांकमा आधारित रहेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीको समीक्षा गरेको छ । जसअनुसार, वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.८७ प्रतिशत छ । आयात ३.६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २२.४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेको